Wasiir Guuleed: Shirkadaha Isgaarsiinta Waxaan Uga Digeynaa Inay Qaataan Awaamiirta Alshabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wasiir Guuleed: Shirkadaha Isgaarsiinta Waxaan Uga Digeynaa Inay Qaataan Awaamiirta Alshabaab
A warsame 11 January 2014 4 April 2019
Muqdisho, Mareeg.com: Wasiirka Arrimaha Gudaha & Amniga Qaranka Mudane Cabdikarim Xuseen Guuleed ayaa uga digay shirkadaha Isgaarsiinta Soomaaliya iney qaataan amar dhawaan kazoo baxay Alshabaab, kaasoo la xiriira iney joojiyaan adeega Internet-ka ee Mobile-ka iyo adega Fiber Optic.
Wasiirka ayaa sheeay in dowladda Soomaaliya la shaqeyneyso dhamaan shirkadaha Isgaarsiinta, islamarkaana gubin doonto iney adeegooda gaarsiiyeen shacabka Soomaaliyeed iyo inkale.
“Dowladda Soomaaliya waxey la shaqeyndoontaa dhammaan shirkadaha Isgaarsiinta si loo hubiyo inay adeegyada internetka iyo howlaha isgaarsiinta ay gaarsiiyaan shacabka Soomaaliyeed. Shirkadaha Isgaarsiinta waxaan uga digeynaa inay la shaqeeyaan kooxaha argagaxisada ah oo ay awaamiirtooda dhageystaan” ayaa lagu yiri war-saxaafadeed kazoo baxay xafiiska wasiir arrimaha gudaha Soomaaliya C/kariim Xuseen Guuleed.
“Waxaan ku boorineynaa shirkadaha Isgaarsiinta, inaysan aqbalin awaamiirta iyo hanjabaadaha kooxaha argagaxisada, oo aysan ka joojin shacabka adeegyada internetka oo muhiim u ah shacabka. Shirkadii lagu helo inay taageereyso kooxaha argagaxisada ah waxaa laga qaadayaa tallaabo sharciga waafaqsan” ayaa lagu yiri warka kazoo baxay wasiir Guuleed.
Wasiir Guuleed ayaa dhanka kale cambaaareeyey hanjabaadda Alshabaab usoo direen shirkaddii fulin weyda amarkooda ee ah iney 15 maalmood ku joojiyaan adeega Internet Mobile iyo Fiber Optic.
“Dowladda Soomaaliya waxey sida ugu adag u cambaareyneysaa falkan oo tusineysa sida kooxaha argagaxisada ah ay argagax ugu ridayaan shacabka oo ay ka hor istaagayaan isticmaalka internetka. Dastuurkeena ayaa qoraya xoriyadda hadalka ay lama taabtaan tahay, oo shacabku ay xaq u leeyihiin ay macluumaadka iyo wararka ku helaan iyadoon la cabsi gelineynin.” Ayuu yiri wasiir Guuleed.
“Al-Shabaab waxaa laga qabsaday magaalooyinka intooda badan waxeyna ku soo urureen inay hanjabaado iyo argagax geliyaan shacabka oo ay hadda rabaan inay ka mamnuucaan internetka. Al-Shabaab haddey doonayaan inay falal dambiyo caalami ah ay ka fuliyaan dalka, dowladdu waxey leedahay mala aqbali karo in kooxaha argagaxisada ay fursad ka helaan ay dalka gudihiisa ku fuliyaan danbiyo caalami ah. Sidaas daraadeed, sida ugu adag ayaan uga soo horjeednaa falkan guracan, wararka noocan ahna waxey nagu sii dhiirigelineysaa inaan xoojinno dagaalka lagula jiro kooxaha argagaxisada ah.” Ayuu sidoo kale yiri wasiirku.
Wasiir Guuleed ayaa dhanka kale, la hadlay warbaahinta oo uu usoo jeediyey ineysan baaahin waxa uu ugu yeeray borobogaandada argagaxisada, wuxuuna yiri “Warbaahinta Soomaaliyeed waxaa mas’uuliyadi ka saarantahay inaysan borobogaandada argagaxisada fulin. Warbaahintu waa inay u istaagtaa danaha shacabka Soomaaliyeed si ay u helaan adeegyada warbaahineed iyo internetka oo ah xuquuq ay shacabku leeyihiin. Warbaahintu waa inaysan kaalmeynin argagaxisada, waxaan ka fileynaa warbaahintu inay noqdaan codkii shacabka oo aysan noqon codka argagaxisada.
Alshabaab ayaa 8-dii bishaan Janaayo 2014 soo saaray amar shirkadaha Isgaarsiinta uga mamnuucayaan adeega Internet Mobile iyo Fiber Optic, waxeyna ku hanjabeen in shirkaddii amarkaas ku fulin weysa muddo 15 maalmood ah lala tiigsan doono Shareecada Islaamka.
Alshabaab ayaa mamnuucidda adeega Internet-ka sabab uga dhigay inuu sida ay yiraahdeen cadowga u sahlayo iney dhibaateeyaan Muslimiinta, islamarkaana fududeynayo in la basaaso dagaalyahanada Alshabaab.
Mareykanka Oo Saraakiil Milateri U Diray Soomaaliya